Amakhosazana eDisney azotywe njengamantombazana anamhlanje | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Amakhosazana akwaDisney azotywe ngokungathi ngamantombazana anamhlanje
UAnoosha ngu umzobi webali labantwana kunye noyilo lweempawu zoopopayi abasizisela imizekeliso enomdla kakhulu apho sinokubona khona amakhosazana eDisney obomi bonke oboniswe ngokungathi ngala mantombazana anamhlanje.
Umzobi wobugcisa kolu ngcelele ngu disney inkosazana sithandwa Kwaye ngexesha lakhe lokuzenzela wenze imifanekiso yedijithali apho acinga ukuba anganjani ukuba la mantombazana ukuba ebekhona kule nkulungwane yama-XNUMX njengolutsha okanye abantu abadala abasebatsha.
Kwi enxulumene neDisney Sizise ukubheja kunye nemisebenzi yamagcisa ohlukeneyo kwiinyanga ezidlulileyo. Ukusukela ingaba amakhosazana akwaDisney anganjani enyameniEwe uTim Burton Ndingaba ndikhokele iimuvi zakhe okanye abalinganiswa ababonayo kule fektri yamaphupha evela kuJackie Huang kunye nezakhe ezizodwa ulungiselelo lwephepha. Indlela yokutsala amehlo yokwenza ibango, njengamabali eDisney kunye nabalinganiswa abendele ngokunzulu kwinkcubeko edumileyo.
U-Anoosha usizisa afeyona ndlela yokwenyani kunye nokungakhathali ngokusisa phambi kwala makhosazana akwaDisney azifumana ekwimeko neemeko apho iidolophu, ungcoliseko okanye ii-smartphones ziyinxalenye yobomi babo. Yena ngokwakhe usixelela ukuba uzame ukuthembeka ngokunokwenzeka kubuntu benkosazana nganye ngokubhala iivenkile ezincinci kubalinganiswa ngamnye abonisa kolu luhlu lunomdla.
Abanye imifanekiso eyenziwe kakuhle kwaye ibalaselisa unyango olukhulu analo lo mzobi ngombala kunye nendlela ithoni ethandekayo kunye neyonwabisayo efumaneka ngayo nganye kuzo, into ethile ekhethekileyo kwaye kufanelekile ukuba ikhankanywe.
Njengoko ndihlala ndithanda ukwenza njalo, kwaye ukuba unako, ndiza kukugqithisa iwebhusayithi yakho ukuze ukwazi funda ngakumbi ngo-Anoosha kwaye leyo mizobo yabantwana ayithandayo ukuzoba kwaye icacise kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Amakhosazana akwaDisney azotywe ngokungathi ngamantombazana anamhlanje
Umculi we-Makeup u-Andrea de la Ossa uziphendulela kwizilo ezibi
Imithetho elishumi yokuchwetheza